Ahoana ny fomba hamoronana fidirana vonjimaika amin'ny WordPress amin'ny alàlan'ny rohy mivantana | Martech Zone
Ahoana ny fomba hamoronana fidirana vonjimaika amin'ny WordPress amin'ny alàlan'ny rohy mivantana
Niasa tamin'ny mpanjifa an-jatony aho tamin'ny WordPress, namolavola lohahevitra, plugins, fampidirana, sns. Amin'ny ankapobeny, lohahevitra na plugin efa voazaha toetra izay manana naoty sy laza tsara dia miasa tsara amin'ny tranokalan'ny mpanjifa. Saingy, matetika, ny plugin na lohahevitra iray dia hanipy bibikely na mety hanimba tanteraka ny tranokala.
Tamin'ity herinandro ity, tena nanana olana aho tao amin'ny tranokalanay momba ny fanavaozana ny Plugin Elementor (izay tena soso-kevitra aho amin'ny maha-mpanangana pejy hita maso) dia nanomboka dingana iray hanavaozana ny fanovana ao amin'ny angon-drakitra. Nanomboka ny dingana saingy tsy vita mihitsy… ary raha manindry azy aho hamita azy amin'ny tanana dia mety ho diso ny tranokalako.
Nifandray tamin'ny ekipa mpanohana tao amin'ny Elementor aho satria tsy nisy na inona na inona azoko natao hanitsiana ilay olana. Namaly haingana izy ireo ary nangataka ny fidirana vonjimaika amin'ny tranokala miaraka amin'ny fahazoan-dàlana ara-pitantanana ary nanoro hevitra ny Plugin fidirana vonjimaika tsy misy tenimiafina, plugin novolavolain'ny Store Apps ekipa.
Fidirana vonjimaika tsy misy tenimiafina WordPress Plugin
Tao anatin'ny minitra vitsy, dia nampiditra sy nampihetsika ny plugin aho, ary nanana URL mivantana hidirana ao amin'ny tapakila izay nanome azy ireo ny fidirana ilainy. Ny tsara indrindra dia tsy nitaky fisoratana anarana tamin'izy ireo mihitsy izany.
Ity dia plugin mahafinaritra satria tsy mitaky anao hiverina sy hamafa ny kaonty noforoninao, ka mahatonga anao ho mora voan'ny kaonty tsy ampiasaina izay mety manana tenimiafina mora hosoka.
Ny plugin dia izay rehetra ilainao, manome ireto endri-javatra manaraka ireto:
Mamorona tsy voafetra fidirana vonjimaika
Mamorona fidirana vonjimaika miaraka amin'izay anjara asa
Tsy ilaina ny solon'anarana sy tenimiafina. Midira miaraka amin'ny a rohy tsotra
Set lany daty ny kaonty. Noho izany, ny mpampiasa vonjimaika dia tsy afaka miditra aorian'ny fotoana lany
Safidy lany daty isan-karazany toy ny iray andro, herinandro, iray volana, sy ny maro hafa. Mametraha daty manokana ihany koa
redirect mpampiasa mankany amina pejy manokana aorian'ny fidirana
Mametraha a fiteny ho an'ny mpampiasa vonjimaika
jereo ny fotoana nidirana farany an'ny mpampiasa vonjimaika
jereo impiry impiry nisy mpampiasa vonjimaika niditra ny fanamboaranao
Tena talanjona aho tamin'ilay plugin izay nampiako azy tao amin'ny lisitry ny Plugins WordPress tsara indrindra ho an'ny tranokalanao orinasa.
Fidirana vonjimaika tsy misy tenimiafina Plugin
Fampahafantarana: Mampiasako ny rohy ifandraisako amin'i Elementor ao amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: mamorona rohy fidiranamamorona fidirana vonjimaikafidirana lany datyahoana nolany daty ny fidiranamitahiry fampiharanafamahana olana wordpressfidirana amin'ny mpampiasaWordPressWordpress loginfiarovana WordPress